I-Solar Refrigerator ye-China, i-Solar Power Refrigerator, uMboneleli we-Solar Refrigerator
Inkcazo:Isiqhamo seSolar,Solar Power Refrigerator,I-Solar Refrigerator Mini,Amandla okugcina i-Solar Refrigerator,,
Isiqhamo seSolar,Solar Power Refrigerator,I-Solar Refrigerator Mini,Amandla okugcina i-Solar Refrigerator,,
Home > Imveliso > Inkqubo yasekhaya ye-solar / DC > Isiqhamo seSolar
Iintlobo zeMveliso ze- Isiqhamo seSolar , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Isiqhamo seSolar , Solar Power Refrigerator ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Solar Energy Large Volume Freezer
Olu hlobo lwefriji enkulu yendawo efudumele luneemeko ezifanelekileyo zokushisa , ukuphendula kumhlaba jikelele wokukhuselwa kokusingqongileyo okukhuselweyo, kunye nomsebenzi okhuselekileyo wokhuseleko lokusingqongileyo kwendawo. unomsebenzi...
I-188L DC yasekhaya Isango elinesibini kwiFriji yefriji
I-friji ye-solar yasekhaya yase-DC , umthombo kuphela wendlela yokusebenza yenkqubo yamandla elanga, kwaye inkqubo ixhotywe ngamabhethri. Ukwamkela i-teknoloji ye-patent ehamba phambili yefriji yefriji kunye nokufudumeza, iyakwazi ukuqonda...
KwiChina Isiqhamo seSolar Abaxhasi
Iifriji zendabuko zisebenzisa amandla amaninzi emveli. Ukususela kwimeko yangoku yokunikezelwa kwamandla jikelele kunye nokukhuselwa kwemvelo, ukuphuhliswa kwefriji yomoya ococekileyo kuya kuba yinto engenakugwema. Ukongezelela, ukunqongophala kwamandla kunye negunya e-Afrika nakwezinye iindawo ezikude akukafakwa kwi-network supply network, kwaye akunakwenzeka ukusebenzisa amafriji ukugcina ukutya, ukubonelela ngeemveliso zentengiso ye-solar friji. Isiqhotho seSolar ngokuyinhloko sibandakanya ifriji ye-photovoltaic yelanga kunye nefriji ye- solar semiconductor. Ifriji ye-solar isekelwe kwisiqhumiso somdabu, esakhiwa yiseli yesoli, umlawuli, i-accumulator kunye nefriji. Iqrijini ayisebenzisi nje kuphela amandla elanga kodwa kunye nezinto eziqhelekileyo zasendlini. Yona mveliso efanelekileyo kakhulu kwikhaya kumazwe asakhulayo.
I-Solar Refrigerator Mini
Amandla okugcina i-Solar Refrigerator